A na-eji ma Urolithin B na Urolithin A ntụ ntụ mee ihe na mgbakwunye, mana enwere uru ọrụ dị iche iche. Ha na-arụ ọrụ na usoro dị iche iche nke ime ihe. Urolithin A bụ tumadi maka usoro mgbochi ịka nká maka usoro mitophagy ya ebe urolithin B nọ na usoro nri egwuregwu dị ka ihe na-ewuli akwara.
Urolithin A bụ ogige nyocha nke ọma, FDA na-ewerekarị ya dị ka nchekwa (GRAS), ebe urolithin B abụghị. Enwere ụdị mgbakwunye mgbakwunye na-eji urolithin A karịa urolithin B.
Urolithin A na Urolithin B nwere njikọ chiri anya. Mkpụrụ pọmigranet nwere urolithins abụọ a. Mkpụrụ pọmigranet bụ zenith nke mkpụrụ osisi. Mgbe mgbari gbazee, akụkụ ha nwere ike gbanwee site na gut flora ka ọ bụrụ urolithin C wee gbanwee Urolithin D na A, wee gbanwee Urolithin B. N'echiche a, urolithin A nwere ike gbanwee urolithin B.
N'ihi ya, a pụrụ ịhụ obere urolithin B n'ọbara ndị mmadụ na-eri nri na mkpụrụ pọmigranet; Otú ọ dị, ihe ndị na-akpata antioxidant na mgbochi mkpali na-esighị ike karịa urolithins A. Otú ọ dị, urolithin B nwere uru nke ya karịa urolithin A. Ọ na-enwe ike ime ka ọkpụkpụ anụ ahụ dịkwuo elu ma mee ka ọganihu ahụ dịkwuo elu.